Jirka haweenka meelaha ugu dareen kulul | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Jirka haweenka meelaha ugu dareen kulul
Jirka haweenka meelaha ugu dareen kulul
Inkasta oo taataabashada ama salaaxistu ay jirka oo dhan raad ku wada.
reebto, haddana jirku isku si’ uma wada dareemo, waxana uu istiinku sii kordhaa kolba marka loo sii dhaadhaco dhinaca shafka ilaa laga gaaro labada naas. Waxaynu aragnaa in waqtiga isdhexgalka, dhabarka iyo barida oo la salaaxaa ay iyana istiin ba’an keenaan.
Goobaha istiin qaadashadu guud ahaan, waxay ku badan yihiin agagaaraha daloollada jirka, labada naasna waxa lagu tiriyaa inay kamid yihiin goobaha ugu istiinka badan jirka, waxaana uu gaaraa heerkiisa ugu sarreeya kolka la maraanmaro ibaha naasaha. Waxa jira dhowr hab oo loo maraanmaro ibaha naasaha loona kiciyo dareenkooda waxaana kamid ah in carrabka lagu salaaxo ama bushimaha lagu qabto ama ilkaha si aayar ah loogu qanqaniino,